Uyiguqula njani ifoto ibe ngumzobo | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka embalwa ngoku, iikhamera ze-smartphone ziye zahlala kwaye zangabeki ngokupheleleyo iikhamera ezihambelanayo. Ngapha koko, ukuba ngoku siya evenkileni ukubona ukuba zeziphi iimodeli ezikhoyo, akukho nanye kuzo ngoku, nangona kunjalo ilungelelaniswe neemfuno zabasebenzisi abaninzi ngemisebenzi enjengeWi-Fi, ibluetooth kunye nokuba nokwenzeka kokunxibelelana kwi-Intanethi ukufaka ngokuthe ngqo iifoto zethu kwinethiwekhi yethu esiyithandayo. Kubo bonke ubomi bethu kusenokwenzeka ukuba xa sithanda ukufota siya kuba nakho ukuthwebula kunye nekhamera yethu inani elikhulu lamaxesha esingathanda ukwandisa ukuze sikonwabele okanye sijike sibe luhlobo lwepeyinti yamalahle, ene-watercolor, ne-India inki ...
Kodwa ukuba singabasebenzisi abathi amaxesha ngamaxesha bathande ukuthatha imifanekiso yexesha labo elikhethekileyo, nokuba yimihla yokuzalwa, imitshato, iihambo okanye naluphi na uhlobo lomnyhadala esithanda ukuwukhumbula, kunokwenzeka ukuba ezinye zazo iimvakalelo ezaneleyo zokufuna ukuyiguqula ibe ngumzobo, ngokungathi iphume esandleni sethu. Zombini kule meko nakuleya idlulileyo, iziphumo ziyafana kwaye sinokukhetha ukuya kwivenkile yepeyinti kwaye sichithe imali eninzi ukuthenga zonke izinto esiza kuzifuna ukuze sikwazi ukufota ifoto kwilaphu.
Okanye, sinokusebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo ezithi basivumela ngamanyathelo ambalwa ukuguqula iifoto zethu esizithandayo zibe yimizobo emnandi, esinokuthi emva koko siprinte kwaye siyakhele ukuba sabelane nabo bonke abantu abeza ekhayeni lethu okanye abanika abantu esibathandayo. Izicelo ezinokuthi zikwazi ukufota kwiifoto zethu zinokufumaneka kwiinkqubo ezisebenzayo zokuhamba kunye nedesktop. Kule nqaku siza kuthetha ngezona zicelo zibalaseleyo kwindalo nganye: Windows, MacOS, iOS kunye ne-Android. Izicelo endizikhethele eli nqaku zezona zifumene olona phononongo lubalaseleyo kwiivenkile zazo, ke luphawu olucacileyo lomgangatho abasinika wona.
1 Guqula ifoto ibe ngumzobo ngeWindows
1.3 Ityesi yomzobo
2 Guqula ifoto ibe ngumzobo nge-macOS
3 Guqula ifoto ibe ngumzobo nge-Photoshop
4 Guqula ifoto ibe ngumzobo ngewebhu
5 Guqula ifoto ibe ngumzobo nge-iOS
5.2 Indawo yamanzi
6 Guqula ifoto ibe ngumzobo nge-Android
6.3 Icebo lokucoca ubuGcisa
Guqula ifoto ibe ngumzobo ngeWindows
I-Akvis Sketch sesinye sezona zicelo zibalaseleyo zokuguqula iifoto zethu zibe yipensile okanye imizobo ye-watercolor, esivumela ukuba sifumane iziphumo ezibalaseleyo nokuba zinombala okanye mnyama namhlophe okoko. ilingisa ubuchule begraphite kunye nemibala yepensile kunye ne pastel kunye necolorcolor. Isinxibelelanisi sesicelo silula kakhulu, kuba xa umfanekiso sele usetyenzisiwe singasebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuhlengahlengisa iziphumo esizifumeneyo, sonyusa ukufiphisa, silungisa ukutyekela kwemigca ... I-Akvis Sketch isinika iisetingi ezili-19 zokungagqibeki ezahlukeneyo nathi sinokujika ngokukhawuleza imifanekiso yethu ibe yipensile okanye imizobo ye-watercolor.
Umzobo ka-Akvis sisicelo esihlawulelweyo esinexabiso lama-euro angama-68, ngohlobo lwesicelo okanye ngohlobo lwe-plugin ye-Photoshop, ixabiso elinokuthetheleleka ukuba uza kuzinikezela ngobungcali kule nto. Ewe kunjalo, ngaphambi kokuthenga usetyenziso, umphuhlisi usinika ithuba lokufumana khuphela ingxelo yetyala ukuze sikwazi ukujonga ukuba ziyazifanela na iimfuno zethu.
Kwakhona umphuhlisi uAkvis usinika esinye isicelo Guqula iifoto zethu esizithandayo zibe yioyile, i-watercolor, i-gouache, usiba, i-inki, i-pastel, okanye i-canvas yelinen. Njengoko sibona, isinika phantse nasiphi na isitayile sokupeyinta esinokuthi sifune ukuguqula iifoto zethu zibe yimizobo esemagqabini ukuze siziprinte kamva ngobukhulu obukhulu kwaye sizakhele.
NjengakwiSiketshi, uMsebenzi wobugcisa usinika ukuseta kwangaphambili ukuze sikwazi khawuleza ujike iifoto zethu zibe ngelaphu ukusebenzisa i-oyile, usiba, i-pastel ... ubuchule kwaye kamva ube nakho ukulungelelanisa iinkcukacha ezincinci ezinje ngobunzima beebrashi, ipeni, uhlobo lokukrola.
Umsebenzi wobugcisa uyafumaneka njengesicelo esizimeleyo okanye nge-Photoshop plugin. Umphuhlisi unikezela ngeentsuku ezili-10 ukujonga ukuba ngaba isicelo senza oko sikuthembisayo. Ukuba sibona ukuba iziphumo zilungile kwaye sifuna ukuzisebenzisa amaxesha ngamaxesha, Kuya kufuneka singene ebhokisini kwaye sihlawule ii-euro ezingama-55 ukumbamba iplagi yeFotohop okanye isicelo nje.
I-Sketch Drawer ivumela ukuba siguqule ngokukhawuleza imifanekiso esiyithandayo ibe yimizobo echanekileyo, imizobo esinokuthi siyiguqule kamva ukuze ihambelane neemfuno zethu, njengokuhlengahlengisa ubume bomzobo, inqanaba leenkcukacha, ubukhulu bemibala ... usetyenziso lomgangatho esivumela ukuba siguqule iifoto zibe yimizobo, ISketch Drawer iyafumaneka simahla ukuzama kwaye ujonge ukuba iziphumo zihambelana neemfuno zethu. Nje ukuba ixesha lokulingwa lidlule, kuya kufuneka siyithenge ukuba sifuna ukuqhubeka siyisebenzisa.
Guqula ifoto ibe ngumzobo nge-macOS
Isicelo esifanelekileyo ukuguqula iifoto zethu zibe yimizobo yenziwe ngepensile okanye ngecolorcolor Ngokusebenzisa iifomathi ezichazwe kwangaphambili esinokuthi sizilungelelanise kamva ukuze iziphumo zifane noko sikufunayo. Esi sicelo, sikwakhona kwiWindows, Inexabiso le-68 euro kwaye singayifumana ngohlobo lwesicelo esizimeleyo okanye njengeplagi yeFotohop, esinye sezixhobo esiza kujongana nazo kweli nqaku ukuguqula iifoto zethu zibe yimizobo ngokukhawuleza nangokulula.
Njengoko isitsho njalo: Ukuba kukho into esebenzayo, sukuyichukumisa. Umsebenzi wobugcisa uphuhlisiwe yinkampani enye njengoSketshi, kodwa ngokungafaniyo noMzobo, uMsebenzi wobugcisa ivumela ukuba sitshintshe iifoto zethu ngokukhawuleza zisebenzise ubuchule beoyile, i-pastel, igouache, i-watercolor… Esi sicelo, esikwakhona kwiWindows, siyasivumela ukuba siphumeze inkqubo yokuguqula ngokwamaqela, ke ukuba iimfuno zethu ziyahamba ngokuguqula inani elikhulu leefoto esisicelo esilungileyo.
Nje ukuba silayishe umfanekiso okanye imifanekiso esifuna ukuyiguqula ibe yimizobo, kufuneka khetha uhlobo lwepeyinti sikhangele phambili, ukuze kamva silungelelanise iziphumo ukuze sifumane kanye isiphelo ebesikade sikhangela. Njengoguqulelo lweWindows, uMsebenzi wobugcisa uyafumaneka njenge-Photoshop plug-in okanye njengesicelo esizimeleyo. Kuzo zombini iimeko, umphuhlisi usinika ithuba lokuvavanya isicelo kwiintsuku ezili-10, emva koko Kuya kufuneka sihlawule ii-euro ezingama-55 ezibizayo.
Guqula ifoto ibe ngumzobo nge-Photoshop
I-Photoshop sisixhobo sokuhlela esifunekayo sayo nayiphi na ingcali yefoto. Ukuze ufumane uninzi lwe-Photoshop, kuya kufuneka ube yingcali yokwenyani. Nangona kunjalo, ukuba sifuna ukwenza uhlengahlengiso oluncinci okanye uhlengahlengiso Akunyanzelekanga ukuba ube yingqondiKuba imisebenzi esisiseko enjengezihluzi iyafumaneka kuye nawuphi na umsebenzisi onolwazi oluncinci.
Ukuze usebenzise iifilitha ezahlukeneyo zobugcisa esisinikwa sisicelo seFotohop, siya kuso Imenyu yeefilitha kwaye ucofe kwigalari yokuCoca. Okulandelayo, umfanekiso esivulekileyo uza kuvela kwaye zonke iifilitha zobugcisa esinokuthi sizisebenzise kumfanekiso wethu ziya kuvela, iifilitha esinokuzidibanisa nezinto ezahlukeneyo, izitayile, imida ...
Nathi sinako ukwenjenjalo yongeza iiplagi ezahlukeneyo, njengaleyo ikhankanyiwe ngasentla, apho sinokufumana iziphumo ezifanayo nezinye izicelo, kodwa kwiimeko ezininzi ziyahlawulwa. Ukukhangela olu hlobo lweeplagi kufuneka sikhangele kuGoogle.
Guqula ifoto ibe ngumzobo ngewebhu
Nge-Intanethi nathi sinako Guqula iifoto zethu zibe yimizobo, kodwa ukhetho lokwenza ngokwezifiso luyancitshiswa kakhulu. Guqula umfanekiso yenye yezi nkonzo, inkonzo eguqula ifoto ibe yipensile entle okanye umzobo onje ngomfanekiso ongentla.
I-BeFunky yenye inkonzo yasimahla ngewebhu esivumela ukuba siguqule iifoto zethu zibe yimizobo emihle. Ngokungafaniyo nokuguqula umfanekiso, U-BeFunky usinika amathuba amaninzi okwenza ngokwezifiso ukuzama ukufumana iziphumo esizifunayo.
pho.to Ikwasivumela ukuba sisebenzise kuphela iifilitha ezahlukeneyo ukuguqula imifanekiso yethu ibe yimizobo, kodwa kananjalo isivumela ukuba sikhule imifanekiso, sitshintshe ukugcwala, ukuqaqamba, ukubhencwa... Nje ukuba siguqule iifoto zethu zibe yimizobo, sinokongeza izakhelo ezahlukeneyo, izicatshulwa, ukongeza iimpembelelo zebala
Guqula ifoto ibe ngumzobo nge-iOS
Umboniso sisicelo esifunwa nguApple Yisa intloko yakho ngqo kulungelelwaniso olukhawulezayo, olungenangxaki hayi kwiividiyo kuphela kodwa nakwiifoto. Ngomboniso sinokwenza iividiyo ezimnandi ezinetekisi, amacebo okucoca ulwelo kunye nee-emoticons. Kodwa umsebenzi wokongeza iifilitha kwiifoto uwenza ube sesona sicelo sisimahla sokukwazi ukuwusebenzisa ukuguqula iifoto zethu zize zivele, nangona sineefilitha ezimbini kuphela.
I-Waterlogue yenzelwe uku Guqula imifanekiso yethu ibe yimibala emihle yamanzi, ke ukuba ujonga isicelo esiguqula imifanekiso yakho ibe lolu hlobo lwepeyinti, iWaterloge sisicelo sakho, isicelo esisibonelela ngeendlela eziyi-14 esekwe kwangaphambili zokwenza indalo yethu ngokulungelelanisa amanqanaba okufuma, imijelo yepeni njenge Kunye nombala. Nje ukuba senze indalo yethu sinokuyithumela kwelinye ilizwe ngesisombululo esiphezulu ukuze sikwazi ukuyiprinta ngobukhulu obukhulu kwaye iipikseli ezinkulu ayizizo ezona ziphambili kuyo.
Enkosi kuArtEffect siya kuba nakho ukuguqula iifoto zethu esizithandayo zibe yimizobo eyenziwe usebenzisa ubuchule bukaVang Gogh, uPicasso, uSalvador Dalí, uLeonardo da Vinci… I-ArtEffect isinika ukuya kuthi ga kwizitayile ezahlukeneyo ezingama-50, ubugcisa, ubugcisa, iprism, izimbo zobugcisa… Ukuba singabathandi bokupeyinta kwaye besisoloko singathanda ukuba nomzobo wakho wento esinokuyithanda, kwaye nesicelo sinokwenzeka. I-ArtEffect iyafumaneka ukhuphelo simahla, kodwa ngokuthenga kunye new watermark, ukuthengwa kunye neewatermark esinokuthi sisuse sisebenzisa ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo osinika kona.
I-Prisma yenye yezona zicelo ziphumeleleyo okoko zafikelela kwiivenkile zesicelo esiphathwayo, enyanisweni, iye yaba yenye yezona zinikezelwa kakhulu yiApple neGoogle. I-Prisma ngumhleli wesithombe esivumela ukuba sisebenzise iifayile zokucoca Guqula iifoto zethu esizithandayo zibe yimizobo ngokusebenzisa isimbo sikaMunch, uPicasso phakathi kwabanye abaninzi. I-Prisma iyafumaneka simahla ngaphandle kwentlawulo. Nje ukuba senze i-canvases zethu, sinokuyigcina kwi-reel yesixhobo sethu, siyithumele nge-imeyile okanye siyipapashe ngokuthe ngqo kunxibelelwano lwasentlalweni.
IfotoViva isivumela ukuba siguqule iifoto zethu esizithandayo zibe imisebenzi yobugcisa ecacisayo nenemibala. Phakathi kwezixhobo zokusinceda ukuphucula uguquko sifumana iibrashi zobukhulu obahlukeneyo ukuze sinike iziphumo ezigqwesileyo. Ukongeza, ikwasivumela ukuba sitshintshe ithoni yombala, ukugcwala, ukufiphala kwemivumbo ...
I-Brushstroke iguqula iifoto zethu zibe yimizobo emihle ngokuchukumisa nje kube kanye. Ukongeza, bayasivumela ukuba sisayine kwaye sabelane ngeziphumo zethu kwezona ndawo zibalulekileyo zonxibelelwano. Nge-Brushstroke singazitshintsha iifoto zethu iindlela ezahlukeneyo zokupenda, zama iipeliti ezahlukeneyo, lungisa iziphumo ezifunyenweyo ...
Guqula ifoto ibe ngumzobo nge-Android
Iyafumaneka kwiVenkile yeApple yeApple ye-iPhone, yenye yezicelo zasimahla ezibonelela ngezona ziphumo zibalaseleyo ngaphakathi kwendalo ye-Android ukwenza ngokukhawuleza nangokungazamiyo imisebenzi egqwesileyo kusetyenziswa isitayile seengcali ezinkulu zexesha lonke ngenxa yokudityaniswa kwenethiwekhi ye-neural kunye nobukrelekrele bokufakelwa.
Umhleli weFoto kaPrisma
Umthuthukisi: Iilebhu ze-Prisma, Inc.
Ngaphandle kokungaziwa kakuhle okanye njengexabiso njengePrisma, UVinci usinika neziphumo ezibhetele nangaphezulu kunangaphambiliUkusukela ukuba sikhethe isihluzo sobugcisa esifuna ukusifumana, sinokongeza iziphumo ezahlukeneyo ukulungisa iziphumo kwiimfuno zethu kunye nezinto esizithandayo. Ukongeza, njengoko sisebenzisa iifilitha ezintsha, sinokuthelekisa iziphumo kunye nezangaphambili, ukuze sikhawuleze sikwazi ukuba yeyiphi efanelekileyo.
Icebo lokucoca ubuGcisa
Icebo lokucoca ubuGcisa sesinye isicelo esinika iziphumo ezilungileyo kakhulu xa kuziwa ekuguqulweni kwemifanekiso esiyithandayo Imizobo emihle yokwenyani. Ukuba ujonga isicelo esikunika iziphumo ezifanayo nezo zeefoto, ifoto yokuCoca ubuGcisa sisicelo sakho. Ndiyabulela kwinani elikhulu lokucoca, inani esinokuthi sandise ngokukhuphela ngaphezulu ngokusebenzisa isicelo, kuya kuba nzima kakhulu ukuba singafumani isihluzi esasikhangela ukuba senze i-canvas efanelekileyo okanye ukupeyinta.
Umhleli Wezithombe Zobugcisa: Iifilitha zeefoto kunye nokupeyinta
Umthuthukisi: Isitudiyo saseLyrebird
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ungayiguqula njani ifoto ibe ngumzobo
Isamsung ithi iBixby Voice ayizukufumaneka de kube sekupheleni kwentwasahlobo